China filament PET plastika ho an'ny orinasa mpanamboatra borosy ao an-trano Xinjia
Fahaiza-mamatsy: 200000 Kilogram / kilao isam-bolana
Antsipirian'ny fonosana: fantsom-bozaka PE, 25kg amin'ny baoritra volontany iray
Seranana: Shanghai na Nanjing
Color Amin'ny fangatahan'ny mpanjifa
Tapaka mitety Boribory, telolafy, lavaka, sns
Cut-halavan'ny 25mm ka hatramin'ny 1220mm
Diameter bundle 50mm na 80mm
fonosana Fantsona PE
Carton 25kg na 30kg, baoritra volontany
Fe-potoana 15 andro fiasana
Payment 30% petra-bola sy fifandanjana mifanohitra amin'ny kopian'ny B / L
Noho ny famerenana amin'ny laoniny avo lenta sy ny fampisehoana mekanika tsara, ny filament PET dia nanjary mpisolo toerana tsara indrindra ho an'ny volon'ondry sy soavaly voajanahary amin'ny karazana fampiharana izay manomboka amin'ny kifafa tsara ka hatramin'ny borosy fandokoana. Ankoatr'izay, ny filamentan'ny PET dia mitazona fahombiazana ara-mekanika tsara amin'ny hafanana marobe.
Experience XINJIA dia niasa tamin'ny sehatry ny filamenta plastika nandritra ny folo taona mahery, mahatakatra ny fomba fampidirana ny filàn'ny mpanjifa tena izy ary tena maika, manome vahaolana azo ampiharina sy mahomby.
Fomba fiasa voarindra sy malefakaNy fomba efa voaporofo dia ahafahantsika mamaly ny takiana amin'ny fotoana sy ny vidiny lasibatra. Mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izahay ary mandray anjara amin'ny sehatry ny borosy.
Mpiara matokyManampy ny mpanamboatra orinasa amin'ny tanjon'ny orinasa izahay amin'ny alàlan'ny fanomezana kofehy vaovao. Amin'ny maha mpanamboatra filament plastika matihanina anay dia mino izahay fa ny fomba tokana hanaovana ny asanay dia ny manome lanja ara-barotra tena misy sy azo refesina.
mahombyNy ankabeazan'ny orinasantsika dia amin'ny alàlan'ny kabary am-bava noho ireo mpanjifanay sarobidy be. Izahay dia mamaritra ny orinasa mahomby ho toy ny iray izay afaka manampy ny mpanjifa manamafy ny fifaninanana amin'ny vokatra vokariny. Ny lisitry ny fahombiazantsika dia vokatry ny baiko efa vita tsara. Ny fibre tsirairay dia vokarin'ny mpiasa efa za-draharaha sy fanaraha-maso henjana QC.
Hisy valiny haingana halefa amin'ny fanontanianao ao anatin'ny 12 ora, vonona ny hanolotra serivisy ireo mpiasa efa za-draharaha sy efa za-draharaha.
Fotoana fiasana: 8:00 maraina - 5:00 hariva, Alatsinainy hatramin'ny Sabotsy (UTC + 8).
Ny fifandraisan'ny orinasa miaraka aminay dia ho tsiambaratelo ho an'ny antoko fahatelo.
Serivisy tsara aorian'ny fivarotana.
Mpanamboatra matihanina Ny maha eo amin'ny sehatry ny filamentan'ny plastika mandritra ny folo taona mahery, miaraka amin'ny tsipika famokarana 12 dia manome antoka antsika fa afaka manatanteraka ny takian'ny mpanjifa 300 taonina isam-bolana.
Kalitao azo ianteherana Manome kofehy ho an'ny mpanamboatra borosy sy kifafa malaza any an-trano sy any ivelany izahay, izay milaza fa azo antoka ny kalitao
Vidiny mendrika Ny price dia mifanaraka amin'ny hatsaran'ny kalitao avo lenta, aryNy vidiny manokana dia atolotra raha be dia be.
Fanaterana ara-potoana Mametraka ny tenanay amin'ny kiraron'ny mpanjifa izahay ary manolo-tena hanome fandefasana ara-potoana.
Betsaka ny orinasa azo isafidianana. Fa raha mitady resaka tsy dia be loatra ianao ary hetsika bebe kokoa, dia hanatsoaka hevitra haingana ianao fa izahay no safidinao tsara indrindra.